नेपाल आज | जम्मा एउटा कागजले जीवनमा
मनोरञ्जन अपराध सुरक्षा
जम्मा एउटा कागजले जीवनमा
बुधबार, ११ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपालआज समाचारदाता
कसको विश्वासमा कसले गर्‍यो घात ? को फस्यो ? प्रहरी अनुसन्धानपछि नै उजागर होला। तर अहिले यही लफडा चलिरहेको छ कांग्रेसनिकट दुई कलाकर्मीबीच। यही लफडामा फस्दा बूढेस्कालमा हनुमानढोका धाउँदैछन् कांग्रेसनिकट कलाकर्मी।
श्रीमती बितेर शोकमा रहेका कांग्रेसनिकट सांस्कृतिक संघका अध्यक्ष। कांग्रेसनिकटकै चलचित्रकर्मी सुष्मा कार्कीका कारण उनले जीवनभरको मिहिनेतले आर्जेको प्रतिष्ठा क्षणभरमै माटोमा मिल्न लागेको हो। साँस्कृतिक संघले पुस्तक प्रकाशनको तयारी गरिरहँदा सहयोग मागेका थिए सुष्मासँग ‍तीर्थले। मागेबमोजिम सुष्माले रकम हसयोग गरिन् र थापालाई एउटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइन्, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी।
तीर्थले सोधेका पनि हुन्, केका लागि ? सुष्माले जवाफ दिइन् 'दाजु, यो सबै मसँगै रहने हो केही फरक पर्दैन।' विश्वासका धारमा सही त गरिदिए। तर त्यही हस्ताक्षर अहिले गलपासो बनेको छ। ४ लाख ७५ हजारको कागजमा सही गराइएको थियो। र त्यसैलाई देखाएर तीर्थसँग सुष्माले बस्न थालेकी छन्।
तीर्थले ७५ मंसिर २९ गते २ लाख र पुस ३ गते २ लाख ७५ हजारको चेक काटिदिए एभरेष्ट बैंकको। उनी चेक साट्न गइन्, तर बाउन्स। यसबीच एक पटक पनि फोन सम्पर्क गरिनन्। सीधै मुद्दा दर्ज गरिदिइन् र सातादेखि तीर्थ झोलाभरि पैसा बोकेर हनुमानढोका (टेकु) धाइरहे। तर, उनी त्यहाँ पुग्छन् मात्र। सुष्मा नआइदिँदा केस साम्य भएको छैन।
सुष्माका अनुसार तीर्थले साँस्कृतिक संघ स्थापनालगत्तै विराटनगमा सम्पन्न कार्यक्रमको सम्पूर्ण खर्च, गीतको एल्बक निकाल्दा, घरभाडा तिर्दा, दुईपटक घरायसी सापट दिइएको रकम हो त्यो। पैसा माग्दा उल्टै भागर हिँडेको, फोन म्यासेज रिप्लाइ नगरेको आरोप छ।
सुष्माका अनुसार तीर्थले कसैसँग वैदेशिक रोजगारीको कागज गरेर लिएको पैसामा श्रमको मुद्दा हाल्न खोजिएपछि उनले त्यो मुद्दा लाग्नबाट बचाएकी थिइन्। यस विषयमा तीर्थलाई जनआस्थाले सम्पर्क राख्दा भावुक हुँदै भने, 'सायद जीवनभरको कमाइ जाने बेला भयो।' यो खबर आजको जनआस्थाबाट लिइएको हो।
ऋषि धमलाको श्रीमतीले अर्को फ्लिम खेल्न पाइन कि पाइनन् !
छबिले हानेर फुटेको सिल्पाको कानको जाली ठिक भयो की भएन होला ?
अर्जुन क्षेत्रीले भविष्यवाणी गर्दै होलान् की छोडे होला ?
जारको पानीको मूल्य बृद्धिः खारेज गर्न माग